Iinkonzo zethu - Tianjin Goldensun Steel Co., Ltd.
Siyazamkela ngabathengi ukuba uqhagamshelane nathi.
Support email goldensun001@goldensunsteel.com
umbhobho ophakathi omnyama
SENTSIMBI INGXELO YOBOMI
aluminium INGXELO YOBOMI
LIGHT SENTSIMBI Lets
BONA BONKE UHLOBO
imveliso nganye wenziwe ngocoselelo, oko kuya kukwenza ube kwaneliswa. iimveliso zethu kwinkqubo yemveliso ziye ndisuke esweni ngokungqongqo, ngenxa yokuba kuphela ikunike arcade games, siya uya kuzithemba. iindleko zemveliso High kodwa amaxabiso ephantsi ngentsebenziswano yethu ixesha elide.
isiseko umxumi ezinkulu ehlabathini
kweminyaka 15 lemveliso amava ukususela ngo-2005, iminyaka eli-12 amava obungcali kumazwe angaphandle ukususela 2007. Awaya imiboniso 48 zasekhaya amazwe ibiba abathengi abaninzi ngobubele. Yaye uku rhweba ngaphandle ku kumazwe angaphezu kwama-60, mpuma Asia, kuMbindi Mpuma, Ummandla Afrika, kuMbindi naseMzantsi Merika mmandla njl
Sigcina kwimpahla neziveliso ezintsha wonke yonyaka, ngoko xa usenza umyalelo siya kuziqinisekisa ixesha delivery. Ngelo xesha, kuya ukugcina umgangatho ophezulu akukho nto kwimveliso okanye ezitokisini.
Siyathemba ukuba basebenzisane kunye nabathengi enkulu kuphuhliso efanayo kunye nezibonelelo.